France - Akụkọ Njem | Akụkọ Njem (Peeji nke 2)
Nri French bụ otu ihe dị mma na nzacha. A na-ahụta ka otu n'ime gastronomies kachasị mkpa n'ụwa….
Osimiri nke Corsica
Anyị na-enye gị ndepụta nke osimiri kachasị mma na Corsica, ọmarịcha osimiri mara mma nke nwere mmiri doro anya dị na agwaetiti French a.
Ihe ị ga-ahụ na Narbonne
Anyị na-agwa gị ihe a ga-ahụ na obodo French nke Narbonne, nleta nke ị ga-ahụ site na mkpọmkpọ ebe Rome na ụlọ akụkọ ihe mere eme.
Ihe ị ga-ahụ na French Brittany
Anyị na-egosi gị ihe niile enwere ike ịhụ na French Brittany, ebe ndị njem nleta jupụtara na obodo mara mma na obodo mara mma.
Ọ bụghị ihe nzuzo na Paris bụ otu n'ime obodo kachasị mma na Europe, ma na ọkwa ala ...
Obodo Basque French bụ oghere dị n'ụsọ Oké Osimiri Atlantic nke na-agwakọta ọdịnala na ọkaibe. Na nke a ọ sonyere ...
5 nnukwu ahụmahụ iji bie na njem na France
Mgbe anyị na-ekwu maka France, anyị na-ezo aka na otu n'ime mba ndị a kacha eleta anya na ụwa maka ala mara mma, nke ...
Nantes njem nleta, ihe ịhụ na French obodo
Nwee ndu dị mfe ebe anyị na-egosi gị ebe ị ga-ahụ na obodo Nantes, nke dị na mpaghara Pays de la Loire.
Riquewihr na Colmar, ọla abụọ dị na Alsace
Riquewihr na Colmar bụ obodo abụọ dị na Alsace nke ghọrọ ihe bara nnukwu uru maka njem nleta n'ihi oke mma ha na ụlọ osisi ha.
Mpaghara Normandy na France, ihe ị ga-ahụ ma mee
Obodo Normandy nke France nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye, site na Mont Saint-Michel mara mma ruo ọtụtụ kilomita nke ụsọ oké osimiri na obodo mara mma.
Chọpụta ihe niile dị mkpa na nleta gị n’obodo Bordeaux, ya na obodo ochie ya mara mma yana ụlọ ya mara mma.
Gbanye na mpaghara Saint Denis na Paris ebe ị nwere ike ịhụ ahịa ya na nnukwu basilica ya, yana ị aụ mmanya na abalị
Amaghị ihe ị ga-eme na France n'oge oge oyi? Site na ndu a ị ga - eme ọtụtụ ihe njem gị site na ala Gallic. Nkwa!
Na mba ọ bụla nke Europe, e nwere obodo na obodo nta ndị zoro ezo ruo taa ma bụrụ ebe aga ...
France na-abụkarị igbe dị mma nke ihe ijuanya. O nweghi ihe mere ugboro ole anyị jiri gaa obodo ndị agbataobi anyị n ’ihi na ...
Prisonlọ mkpọrọ nke Count of Monte Cristo dị na Marseille
Chọpụta ihe nzuzo nke ọnụ ụlọ mkpọrọ Monte Cristo, ebe mmiri gbara gburugburu ị ga-agarịrị na njem gị na Marseille na France.
Ozi ileta Loire castles si Paris
Soro njem nke Châteaux de la Loire si Paris
Normandy bụ mpaghara French nke na-adọta ndị njem nleta nwere mmasị na Agha Worldwa nke Abụọ, ebe ọ bụ ...
Chọpụta osimiri kachasị ogologo na Europe na ụwa. Enwere ndị ọ bụla na Spain? Banye ma nwee obi uto osimiri a ebe ichoro iku mmiri na oke osimiri.
Cap d'Agde, isi obodo nke ịgba ọtọ
Ugwu Cap d'Adge na-adọta ọtụtụ puku ndị njem nlegharị anya na-achọ ịkwa iko, ị chọrọ ịma ebe obibi ha, ndụmọdụ na ọrụ ndị dịnụ?
Fọdụ mara mma na obere mara castles nke Loire
Offọdụ n'ime obere mara castles na Loire Valley ma dị nnọọ ka ndị mara mma dị ka ndị ọzọ touristic castles
Dune nke Pilat na France
Pilat Dune bụ oghere okike nke mara mma nke ukwuu, n'etiti oke ohia na Oke Osimiri Atlantic.
Lọ ihe ngosi nka nke Grand Lodge nke France, na Paris
Ke Paris e nwere obere ihe ngosi nka, ọ bụ Museum nke Grand Lodge nke France
Oke osimiri French 5 kacha elu
A ndepụta, n'elu 5, nke kacha mma osimiri na France
Orkgbala, akara nke Alsace
stork, akara nke Alsace, nnụnụ a hụrụ n'anya nke ukwuu na-asọpụrụ na mpaghara a na Europe.
Ebe ndị njem na Normandy
Normandy bụ mpaghara France nke nwere ọtụtụ ebe nkiri
Ihe oyiyi abụọ nke nnwere onwe nke Paris
Na Paris enwere ihe oyiyi abụọ nke Statue of Liberty
La Paloma, osimiri mara mma na France
La Palomar osimiri bụ ụsọ osimiri French nke dị nso na Nice
Ọtụtụ na-ekwu na ọ bụ akụkụ kachasị mma ma maa mma nke French Mediterranean. Aha ya, nke a maara nke ọma na Midi, bụ Calanque d 'En-Vau, obere obere na-enweghị ike ịnweta ya na mmiri turquoise dị n'etiti obodo Marseille na Cassis.
Nnukwu nnukwu ụlọ ụka Senti nke Saint Pius X na Lourdes
Nke a bụ ebe bara uru ịchọpụta, ọbụlagodi ndị njem na-ekweghị ekwe. Ezoro n'okpuru Boulevard Père Rémi Sempé na Pyrenean obodo nke Lourdes na France, bụ nnukwu Basilica nke Saint Pius X, nke a makwaara dị ka basilica dị n'okpuru ala.
The Parc Animalier de Thoiry bụ ogige zoological dị mkpa na mpụga Paris.
Castlọ nke Sully-sur-Loire (Château de Sully-sur-Loire) bụ ebe ochie ewusiri ike nke e wuru na njedebe nke narị afọ nke XNUMX.
La Tête au Carré na Nice
Ọ bụ onye omenkà Sascha Sosno sụgharịrị okwu a "ọ bụ akụkụ anọ" bụ onye ji ya chepụta ma wuo otu ụlọ kacha ewu ewu na nke mbụ n'ụwa: Central Library of Nice, nke aha Tête au mara nke ọma. Carré, isi isi.
Prehistoric Caves na France
Taa, anyị ga-eleta ụfọdụ n'ime ọgba ndị prehistoric a ma ama na France. Ka anyị malite njem na Lascaux Caves, a ...
Montalivet, onye nlekọta osimiri ndị gba ọtọ na Europe
Mecca maka ndị naturist na nudists sitere na Europe niile dị na Montalivet, n'ụsọ Oké Osimiri Atlantic na ụsọ oké osimiri French nke Aquitaine. A mụrụ Naturism ebe a ihe karịrị afọ 100 gara aga. Otu obere klọb a hibere n'oge ọkọchị nke 1905 etoola oge ma taa bụ otu n'ime ụlọ ezumike Naturist kachasị n'ụwa.
Modernlọ abụọ nke oge a kwesịrị ịhụ na France
Taa, anyị na-ekwu maka ụlọ abụọ mara mma na France nke bụ Sainte-Marie de La Tourette na Gare de Saint-Exupery.
U Trinighellu, ụgbọ oloko na-aga na Corsica
U Trinighellu bụ obere ụgbọ oloko ama ama nke na-agafe Corsica site na ugwu ruo na ndịda, njem dị nwayọ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa anọ n'etiti obodo Ajaccio na Bastia site na mbara ala mara mma. Karịsịa ka akwadoro ndị hụrụ ụgbọ oloko njem, kamakwa ndị na-achọ ahụmịhe dị iche iche, njem ezumike na ebe mara mma.
Zọ ndị njem site na Paris na-eleta ihe ncheta 6 a ma ama nke obodo Seine
Pyramid A Na-agbanwe agbanwe nke Louvre
Pyramid Inverted nke Louvre, na traction na Paris
Ọ dịghị onye gara Paris nwere ike inwe obi abụọ na isi obodo French bụ otu n'ime obodo kachasị nwee ịhụnanya na ụwa. Otu akụkụ nke amara ahụ dịkwa na ịma mma na ịdị mma nke àkwà mmiri ndị gbasara Seine. Enwere ihe dị ka akwa mmiri 50 n'akụkụ osimiri ahụ na mpaghara -le-de-France, mana ọ bụrụ na ị ga-ahọrọ atọ kachasị atọ ụtọ, nhọrọ ahụ doro anya.
Etretat (France): chọpụta osimiri ndị na-adọrọ mmasị nke Normandy
Etretat bụ otu n'ime ebe ndị njem nlegharị anya kachasị mma na Normandy (North nke France).
France: Trois Corniches, okporo ụzọ paradakụl nke French Riviera
A na-ahụta Osisi Atọ Atọ (Les Trois Corniches) dị ka otu n'ime okporo ụzọ dị egwu dị egwu n'ụwa.
Alsace, mpaghara French nke kacha mara ihe banyere ọdịnala ekeresimesi
Mpaghara ókèala nke Alsace nwere mmetụta siri ike n'otú esi agba Krismas na France.
Obodo Nantes bụ ebe obibi nke ọmarịcha ụlọ mgbe ochie dịka Katidral nke Saint Peter na Saint Paul, ihe ncheta okpukpe ndị Gothic nke nwekwara ili nke Francis nke Abụọ.
A njem site na Provence: The lavender ụzọ
Na oge ochie Provence bụ otu n'ime ógbè ndị Rome kachasị amasị. Ihe jupụtara na vestig na-agba akaebe na ...
Arras, njem nlegharị anya akụkọ ihe mere eme na mgbago ugwu France
Anyị na-aga ugwu nke France iji gaa ma mata obodo Arras, nke ihe ncheta ya na ebe ya si Agha Secondwa nke Abụọ akara.
Osimiri French kacha mma
Oge okpomọkụ na-abịa na oge eruola ịga chọọ osimiri iji nọrọ ụbọchị ole na ole n'okpuru ụzarị Febo….
Cannes (FRANCE): Ebe kachasị mma na French Riviera
Cannes bụ ihe nkiri sinima, ndị ama ama na okomoko. Ọtụtụ mgbe a na - akpọ ya -na ikpe ziri ezi - isi obodo French nke sinima, ...
Nice (FRANCE): Ebe kachasị mma na Côte d'Azur
Akpọrọ ya isi obodo Côte d'Azur n'ihi oke mmetụta ọdịnala na ọdịbendị ya na mpaghara ahụ, Nice ...
Ihe ncheta akụkọ ihe mere eme kachasị mkpa na Paris
Na-amaja njem sara mbara ala France? Obodo Gallic a jupụtara n'ọtụtụ ebe na-adọrọ mmasị ya na nke ahụ ...